Bayer Leverkusen Oo Cashar U Dhigtay Atletico Madrid + Muuqaalo
HomeChampions LeagueBayer Leverkusen Oo Cashar U Dhigtay Atletico Madrid + Muuqaalo
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa iyadoo gacanta sare leh u socdaalaysa Spain lugta labaad ee wareega 16 ka horyaalka naadiyada Yurub, kadib markii ay gurigeeda ku xasuuqday kagana badisay 1-0 kooxda haysata horyaalka La Liga ee Atletico Madrid.
Darbad xoog badan farsamadeeduna sareyso oo uu qaybtii dambe ee ciyaarta shabaqa ku daloolin gaadhay ciyaaryahan Hakan Calhanoglu ayaa u suurto galisay naadigii martida loo ahaa inay hogaanka ku qabtaan guushuna ku raacdo is araggi hore ee Champions League.
Wiilasha wacdaraha indhawaydba dhigayay ee tababare Diego Simeone ayaa casaan laga siiyey ciyaaryahan Tiago kadib markii uu xanaaqad uu sameeyey lagu abaal mariyey kaadh kii labaad oo huruud ah ciyaarta dhexdeeda, waxaanay ku soo hadheen 10 nin laga bilaabo daqiiqadii 75 aad ee ciyaarta.
Fernando Torres ayaa laga diiday gool uu dhaliyey 15 daqiiqo ka hor dhamaadkii ciyaarta , waxaanay garsoorku isku raaceen in kubada oo koorne laga soo laagay ay dibada garoonka uga baxday si qaloocdana u soo gashay.
Guushan ay gaadhay Leverkusen ayaa ka dhigan inay fursad qaali ahi gacanta ugu jirto ka hor natiijada is araga labaad ee labada kooxood ku dhex maraya geggida Vicente Calderon Bisha March 17 keeda.
Manchester United Oo 2-0 Ku Dhirbaaxday Huddersfield Town Iyo Sanchez Oo Furtay Bogga Dhalinta Goolasha
03/02/2018 Abdiwahab Ahmed
Sami Khedira Oo Ku Sii Jeeda Ingiriiska